Ny Fanehoankevitry Ny Vahoaka Vietnamiana Manoloana Ny Didy Momba Ny Ranomasina Atsimon’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2016 2:55 GMT
Vietnamiana mpikatroka mitaky an'i Shina hanaraka ny didin'ny fitsarana iraisampirenena. Sary : Facebook
Avy amin'i Loa, tranokalambaovao sy podcast tsy miankina mamoaka tantara momba an'i Vietnam ity lahatsoratra navoakan'i Giang Nguyễn ity. Navoaka etoana ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ny 12 Jolay, ny Fitsaràna maharitra mpanelanelana ao amin'ny Firenena Mikambana dia namoaka didy hoe tsy mitombina ny filazan’ Beijing momba ny Ranomasina Atsimon'i Shina.
Faritra ao Shina izy ity izay nofaritany taminà sori-dàlana sivy mamakivaky ny Ranomasina Atsimon'i Shna. Raha mahita azy io ao anaty sarintany ianao, tahaka ny tarehintsoratra U ilay izy na lela iray mivoaka avy eo amin'ny sisintany atsimon'ny tanibe Shina, ary izany no iantsoan'ny Vietnamiana azy hoe : lưỡi bò, lelan'omby.
Momba ireo faritra fanjonoana manankarena ao Scarborough Shoal, tandavana vatohara sy nosy ao amin'ny Ranomasina Atsimon'i Shina, mihitsoka anaty fifandirana mivaivay i Shina sy Filipina. Loe i Filipina no niafaràny ka tamin'ny Janoary 2013 dia nametraka fitoriana tao amin'ny Fitsarana Maharitra Mpanelanelana (PCA) ho fanoherana ireo fitakiana faritany mitratrevatreva ataon'i Shina .
Mifàka aminà fehezan-dalàna fantatra amin'ny fanafohezana azy hoe UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Seas – Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny Lalàna mifehy ny Ranomasina) ny fototra araka ny lalàna iorenan'io didy io. Shina, Filipina (ary Vietnam) dia samy mpanao sonia ao anatin'izy io daholo, izay notendrena handamina fifandirana.
Ny voalohany dia ny hoe tsy mendrika ireo filazàn'i Shina momba ny zo ara-tantara amin'ilay faritra miendrika U. Rehefa nanao sonia ny UNCLOS i Shina, tsy nandà ny zo rehetra ara-tantara.
Ny faharoa dia hoe tsy mendrika ny hahazo faritra manokana ara-toekarena ireo nosy voatrolombelona. Anaty toejavatra maro, niezaka i Beijing ny hitazona ny filazàny tamin'ny famadihan-dry zareo ho nosy ireo vato sy vatohara. Izany hoe, ara-bakiteny dia fampivangongoana fasika tambonin'ny vatohara sy fanorenana seranana ary fotodrafitrasa ara-tafika teo an-tampony.
Kanefa ny UNCLOS — sy ny tribonaly– tsy namoaka didy momba izay manana fiandrianana eo.
Lasa manao mpisolovava ny devoly ireo be fisalasalàna ary manondro fa na eo aza ireo fanitsakitsahana ataon'i Shina, tsy manana rafitra ho entina manery an'i Shina hanaraka ilay didy ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena, raha tsy misy fampakàrana ny fihenjanana.
Ahoana ny fanehoankevitr'ireo vahoaka ao Vietnam?
Nitehafan'ireo Vietnamiana rehetra manarantany ilay didy.
Tao Hanoi, nantsoin'ireo mpikatroka mafàna fo eo ambanin'ilay fanentanana “No-U” (Tsy mila U) ny vahoaka Vietnamiàna rehetra hivoaka ho eny amin'ny Farihin'ny Sabatra Nafototra, mba haneho ny fanohanany ny PCA.
Ny Alahady 17 Jolay, betsaka ireo olona nitafy akanjobà “No-U”. Tena faly izahay nitafy azy ireny satria nandritry ny dimy taona lasa, nolazain'ny fitondràna kaominista ao Hanoi ho singa mpanakorontana ny olona tahàka anay. Koa ankehitriny izahay manana ity didy avy amin'ny PCA ity, tena faly be izahay, satria eken'ny vondrom-piarahamonina manerantay io didy fandroahana io.
Saingy ilay mpikatroka mafàna fo, Nguyễn Chí Tuyến, mpikambana ao anatin'ilay fanentanana “No-U” miteny amin'ny Loa fa tsy naharitra ela ny firavoan-dry zareo.
Nandefa polisy mpitandro filaminana ny governemanta, avy any amin'ireo distrika sy vohitra manodidina, mba handeha hanao fahirano manodidina ny toerana nanaovana fihaonana. Ireo rehetra nitafy ankanjobà nisy soratra “No-U”, niantsoan'izy ireo mpitandro filaminana mandeha fiara mba hanaisotra azy ireny. Tsy olana taminy na nanao ny tsy nety na tsia ilay olona nitafy akanjobà nisy soratra “No-U”. Noraofin-dry zareo nankany anaty fiara daholo izy rehetra.
Lazain'i Tuyến fa 40 hatramin'ny 50 ireo mpaneho hevitra no voasambotra sy nentina tamin'ny fiarabe. Nafahana izy ireo ny alin'iny andro iny.
Tao Saigon, nampiasa tetika hafa ireo mpaneho hevitra noraràna tsy hahazo hivorivory – naparitany avy eny ambony kodiarandroa ny hafatr'izy ireo. Nivezivezy nanerana ny arabe ireo vondrona mpitaingina kodiarandroa, ka ny tsirairay dia misy olona iray mitàna ny soratra mivaky hoe “Shina Mialà ivelan'i Vietnam” sy “Henatra i Vietnam raha oharina amin'i Filipina.”
Amin'izao fotoana izao izay efa nametrahan'i Manilla ny fototra, marobe ireo fikambanam-piarahamonina sivily Vietnamiàna no mitaky ny hanamafisan'ny governemanta ny fijoroany sy hitondràny ny raharahany manokana ifanolànany amin'i Shina, ary hiaro amin'ny heriny rehetra ireo Vietnamiana mpanjono izay miatrika sotasota eny an-dranomasina. Saingy lazain'ireo manampahaizana manokana fa toa tsy ho izany, indrindra raha jerena ny lasa izay tsy itiavan'i Hanoi loatra hihantsy ilay kaominista mpiray vodirindrina aminy.
Tsy azo antoka loatra izany hoe i Hanoi hanaraka ny fitakiana mavesatra avy amin'ny vahoakany izany. Amin'ny fitazonany ao an-tsaina ireo tohana ara-toekarena sy politika omen'i Beijing azy, mety hanapaka hevitra hamaha olana amin'ny fanaovana fanambaràna voalanjalanja fotsiny i Hanoi.
Henoy ato ny podcast (amin'ny teny anglisy) momba io olana io: